Shirkii weynaa ee loo yaqaanay 'Miami Great Convention & Visitors Bureau' ayaa ku dhawaaqay Madaxweynaha cusub iyo agaasimaha guud
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Ururada » Shirkii weynaa ee loo yaqaanay 'Miami Great Convention & Visitors Bureau' ayaa ku dhawaaqay Madaxweynaha cusub iyo agaasimaha guud
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
David Whitaker ayaa loo magacaabay Madaxweynaha iyo Agaasimaha Guud ee soo socda ee ah suuq geynta loogu talagalay Greater Miami iyo Miami Beach.
Balantu waa guri ku noqoshada Whitaker oo xubin ka ahaa kooxda GMCVB muddo 17 sano ah.
Whitaker wuxuu ka tagay Miami markii hore 2007 sababtoo ah magacaabista doorka Madaxweynaha & Maamulaha Dalxiiska Toronto.
Shantii sano ee la soo dhaafey, Whitaker wuxuu u shaqeeyey Madaxweyne iyo Agaasime Guud ee Dooro Chicago, DMO ee Chicago.
The Shirkii Miami ee Weyn & Booqdayaasha (GMCVB) ayaa maanta shaaca ka qaaday in David Whitaker loo magacaabay Madaxweynaha & Agaasimaha xiga ee ururka suuq geynta (DMO) ee Greater Miami iyo Miami Beach. Balantu waa ku soo noqosho Whitaker oo xubin ka ahaa kooxda GMCVB muddo 17 sano ah (1990 - 2007), ugu dambayntiina wuxuu ahaa kuxigeenka madaxa fulinta ee ururka & Sarkaalka Suuqgeynta. Shan sano kahor taas, wuxuu ka shaqeeyay shaqaalaha fulinta ee United Way of Miami-Dade.
Whitaker ayaa tagay Miami markii hore 2007 sababtoo ah magacaabista doorka Madaxweynaha & Agaasimaha Guud ee Dalxiiska Toronto (oo hadda loo yaqaan Destination Toronto), DMO ee Toronto, halkaas oo uu hoggaaminayey ururka siddeed sano. Intii uu joogay Toronto, ururka waxaa loo codeeyay shirweynihii ugu sarreeyay ee Waqooyiga Ameerika iyo xafiiska booqdayaasha iyo xarunta shirarka ee ra'yi dhiibashada in ka badan 650 qorsheeyeyaal kulan. Whitaker ayaa horseeday dalabyo guuleysi ah oo lagu martigelinayo NBA All-Star Game iyo Pan American / Parapan American Game.
Markii uu soo gabagabeeyey shaqadiisii ​​Toronto iyo shantii sano ee la soo dhaafey, Whitaker wuxuu u soo noqdey Madaxweynaha iyo Maamulaha Dooro Chicago, DMO ee Chicago. Intii uu joogay Chicago, wuxuu lahaa mas'uuliyadda dhiirrigelinta iyo iibinta xarunta ugu weyn ee shirarka ee Mareykanka, McCormick Place. Isaga oo hogaaminaya, DMO waxay si guul leh u dalbatay oo ay martigelisay NBA All-Star Game, MLS All-Star Game, North America tartankii ugu horreeyay ee Tennis-ka Laver Cup, NCAA Frozen Four, iyo dhacdooyin badan oo kubbadda cagta iyo rugby-ga ah. Chicago, oo ah meel loo socdo, ayaa looga codeeyay ra'yiururin qaali ah oo akhristayaasha xariifka ah ee Akhristayaasha Socdaalka ee CondéNast' Xulashada Abaalmarinta “Magaalada ugu Wanaagsan Fiican” ee lagu booqdo afar sano oo xiriir ah oo aan horay loo arag (2017 - 2020), dhammaantoodna waxay ka dhaceen hoggaanka Whitaker.
"David wuxuu noo soo celiyey waxyaabo naadir ah oo awood leh - khibrad aad u tiro badan iyo aqoon bulshadeena ah, oo ay weheliso adduun weyn oo waaya aragnimo ah oo laga helay kor u qaadista laba ka mid ah noocyada ugu caansan Waqooyiga Ameerika ee kala ah Chicago iyo Toronto," ayuu yiri GMCVB Gudoomiye Bruce Orosz. Isku dhafkan, gaar ahaan labada magaalo ee uu horseedka u ahaa sida ugu weyn ee heshiisyada iyo dhacdooyinka dhacdooyinka, waxay ka caawin doontaa warshadeenna martigelinta iyo la-hawlgalayaashayada inay u qaadaan Greater Miami iyo Miami Beach heerka xiga. "David wuxuu sidoo kale guulo waa weyn ka gaaray kor u qaadida bulshooyinka kala duwan wuxuuna muujiyaa hammi xoog leh oo lagu hormarinayo kala duwanaanta, sinaanta iyo ka mid noqoshada".
Whitaker waxaa lagu xushay gabagabada lixdii bilood ee baaritaanka fulinta qaranka oo dhameystiran oo ay sameeyeen guddi gaar ah oo loo magacaabay 14 xubnood oo ka kooban ganacsiyada maxalliga ah iyo hoggaamiyeyaasha bulshada kuwaas oo ka tarjumaya qowmiyadaha, jinsiyadda, jinsiga iyo jinsiga kala duwanaanta bulshada, iyo sidoo kale sida kala duwanaanta ururada iyo warshadaha qaarkood ee Gobolka Miami-Dade, gaar ahaan warshadaha soo dhaweynta. Guddiga raadinta waxaa la taliyay Mike Gamble, Madaxa Fulinta ee SearchWide Global, oo ah shirkadda ugu sareysa ee raadinta fulinta oo si gaar ah u daboolaysa goobta DMO iyo Jaret Davis, oo ah Isuduwaha Wadaagga ee Greenberg Traurig, oo muddo dheer lataliye ka ahaa GMCVB. Guddiga raadinta ayaa amar ku bixiyay in la baaro dhammaan musharixiinta wax-ku-oolka ah, gudaha iyo qaran ahaanba, iyadoo la tixgelinayo dabeecadda gaarka ah ee Miami inay tahay meel loo socdo. Guddiga raadinta waxay sii amreen in kala-goynta ay ka tarjumeyso kala duwanaanshaha hodanka ee Gobolka Miami-Dade, ugu dambeyntiina waxay dhalisay wareysiyo wareegii koowaad, 75% ka mid ah oo ka duwanaa jinsiga, qowmiyadda iyo aragtida LGBTQ iyo 25% oo ka kooban Afrikaan-Mareykan matalaad. Wareeysiyada wareegga labaad waxaa ka mid ahaa 50% musharixiin kala duwan oo ka kala yimid jinsi, qowmiyadeed iyo aragtida LGBTQ, 25% ka mid ah oo ka koobnaa matalaadda Afrikaanka Mareykanka. Isku soo wada duuboo, kooxda, oo ay caawisay SearchWide Global, waxay weydiisey ama ka badbadisey in ka badan 125 musharax oo ka soo bixi kara bulshada maxalliga ah, waddanka oo dhan iyo caalamkaba, waxayna si fool ka fool ah ula shireen siddeed musharrax wareega koowaad iyo afar musharrax wareegii labaad.